Maxay Tahay Xaaladda Horseeda In Qofka Mar Kasta Uu Wehel Ka Dhigto Teleefoonka, La'aantiisana Uusan Joogi Karin? - Xogside-news Xogside
Home BARNAAMIJYADA CAAFIMAADKA maxay tahay xaaladda horseeda in qofka mar kasta uu wehel ka dhigto...
maxay tahay xaaladda horseeda in qofka mar kasta uu wehel ka dhigto teleefoonka, la’aantiisana uusan joogi karin?
Mararka qaar waxaad arkeysaa adiga oo si weyn ugu mashquulsan teleefoonkaaga gacanta, waxaana eegeysaa teleefoonka adiga oo raadinaya farriinta ku dhaaftay oo lagu soo diray ama in aad la socota adeegyada kale ee teleefoonka ku jiro sida baraha bulshada.
Maskaxdaada waxay ku xidhan tahay teleefoonka adiga hadba eegaya, haddii xaalad noocan ah aad isku aragto waxaa kula soo deristay xaalad la yiraahdo ‘nomophobia’, waxaa xaaladdan kula qabaa malaayiin qof oo ku nool dunida.
Ereyga nomophobia waxaa laga wadaa xaaladda horseeda in qofka mar kasta uu wehel ka dhigto teleefoonka, la’aantiisana uusan joogi karin.
Khuburrada qaar waxay xaaladda ku tilmaamaan ‘qabatin’ isla markaana qofka uu mar kasta isha ku hayo teleefoonkiisa gacanta iyadoo markaas aysan jirin wax baahi ah oo uu u qabo.
Balse qabatinka noocan ah ma ahan mid iska yimid balse waa mid lasii qorsheeyay oo la go’aamiyay, sida uuu qabo Profasoor Larry Rosen oo ah cilmi baare ku takhasusay cilmu nafsiga.
Wuxuu intaa ku daray in shirkadaha teknooloojiyadda ee soo saara teleefoonada casriga ah “ay shaqaaleysiiyaan khuburro adeegyada teleefoonada u sameeya iyo weliba seynisyahano qaabilsan cilmu nafsiga kuwaas oo shaqadoodu tahay sidii lagu gaari lahaa dadka isla markaana saameyn loogu yeelan lahaa si ay ugu mashquulaan teleefoonada casriga ah iyo adeegyada ku jiraba.”
Hadalka Dr Rosen waa mid macquul ah marka la fiiriyo sida ilbiriqsi kasta dadka ay ugu mashquulsan yihiin teleefoonada iyagoo aanan dareemin in wakhti uu ka lumay.
Sida laga soo xigtay Dr Rosen, shirkadaha soo saara teleefoonada waxay adeegsadaan xeelado dhowr ah si ay u hantiyaan quluubta dadka oo ay uga iibiyaan wax soo saarkooda.
Xeeladaha shirkadaha teknooloojiyadda
Dr Rose oo ah cilmi baare ku takhasusay cilmu nafsiga wuxuu leeyahay shirkadaha soo saara teknooloojiyadda waxay adeegsadaan xeelado dhowr ah si dadka ay ula qabatimaan teleefoonka iyagoo aysan wax war ka heynin gaar ahaan in qofka uu dan ka dhigto isticmaalka teleefoonka isaga wax howl ah qabsanin.
Tusaale ahaan, baraha bulshada sida Facebook iyo TikTok, qof si weyn ayuu ugu mashquulayaa isaga daalacanayo muuqaallada iyo qoraallada lasoo dhigo halkaas kuwaas aanan dhammaaneynin, laga yabaa in qofka xitaa ay ku adkaato in uu akhriyo buuggaagta iyo in ku faa’ideysto cilmi.
Wuxuu sheegay in markii ay soo saarayeen teleefoonada ay shirkadaha ay adeegsadeen khuburro ku xeeldheer cilmu nafsiga kuwaas oo ka caawiyay in dadka ay ku mashquuli karaan teleefoonkooda haddaba iyaga oo raadinaya farriimaha loo soo diro gaar ahaan kuwa baraha bulshada laguugu soo diro ama aragtida ay dadka ka qabaan qoraalka ama muuqaallada aad dhigto halkaas.
Tani waxaa laga yaabaa inay tahay qaababka iyo xeeladaha kala duwan ay ku tartamayaan shirkadaha soo saara teleefoonada casriga ah si ay u hantaan wakhtigaaga iyo maskaxdaada balse wacyigelinta ku saabsan arrintaas wax isbaddal ah dadka uma horseedi doonto maadama teleefoonada casriga ah ay la wareegeen wakhtigeena, waa wax ka baxsan in uu madadaalo yahay ama in loo baahan yahay” ayuu yiri Dr Rosen.
Teleefoonada casriga ma loo baahan yahay ama waa lala qabsaday?
Xidhiidhka nagala dhexeeyo teleefoonada casriga ah ayaa sii xoogeysanaya, maanta waxay qeyb ka noqdeen nolosheena.
Waxay qabtaan shaqooyin dhowr ah sida in lagula socdo xaaladda wadne garaaca ama qofka qaba dhiig karka, waxay teleefoonada ku yihiin wehel marka aad kaligaa safreysid, waxaana adag in xidhiidhka nagala dhexeeyo teleefoonada lagu tilmaamo ‘baahi loo qabo’ in lala ‘qabsaday’
Danaha iska soo horjeedo iyo mas’uuliyadda
Dad badan waxay teleefoonada ku sitaan jeebabka, wuxuu qeyb ka noqday dunida carsiga ah, wuxuu fududeeyay la socodka xaaladda adduunka.
Neil Watson oo ah cilmi baare qaabilsan teknooloojiyadda wuxuu ku doodaya ‘in shirkadaha soo saara teleefoonada ay noqdeen matoorki wax u sahlayay dadka sameeya adeegyada casriga ah ee teleefoonada laga helo” dhinaca kalena loo baahan yahay in la aqoonsado in shirkadaha soo saaro teleefoonada caaqiilka ay xal u raadinayaan arrintani.
Cadaadiska ay wajahayaan shirkadaha soo saara teleefoonada iyo kuwa soo saara adeegyada waa in lagu kashbaa inay qaataan mas’uuliyadda ah maxay dadka ula qabsadeen isticmaalka teleefoonada” ayuu yiri Nal.
Sida laga soo xigtay Neil, tallaabooyinka ay mustaqbalka qaadi doonaan shirkadaha ayaa noqon doonaa kuwo xaddidan inkasta ay wadaan tallaabooyin ay wax uga qabanayaan saameynta ay ku yeesheen bulshada iyo nolosha inkasta oo arrintani ay kasoo horjeedo damacooda ah in faa’ido ay ka sameeyaan arrintani.
Previous articleMuxuu sheegay hoggaamiyaha Ruuxiga ee Daalibaan oo markii ugu horreysay fagaaraha lagu arkay?
Next articleKhadar Ahmed: Soomaaliga loo diiday inuu barto aflaanta hadana guusha weyn ka gaaray